Real Madrid Oo Soo Bandhigtay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Sii Haysanayso Cristiano Ronaldo – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaCayaarahaReal Madrid Oo Soo Bandhigtay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Sii Haysanayso Cristiano Ronaldo
Real Madrid Oo Soo Bandhigtay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Sii Haysanayso Cristiano Ronaldo
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay Cristiano Ronaldo ka bixiyaan laagta canshuurta ee loo heysto si uu kooxda u sii joogo, sida ay qortay jariirada Ingariiska ee The Sun.
Xiddigii hore ee Manchester United ayaa sheegay inuu doonayo inuu isaga tago Spain ka dib markii lagu eedeeyay inuu dowlada Spain ka qiyaameeyay canshuur gaareysa 14 milyan yuro.
Waxaana uu aad uga carooday in lagu eedeeyay inuu sameeyay qiyaano canshuur taasoo keentay rabitaankiisa ah inuu ka tago Spain.
CR7 ayaa xitaa bedelay sawirka akoonkiisa Instagram isagoo ku bedelay sawir isagoo u ciyaaraya xulka dalkiisa ee Portugal.
Laakiin Real Madrid ayaa sameyn doonta wax walba oo ay ku ceshan karaan Ronaldo, waxaana ay diyaar la yihiin inay sannad kale ugu kordhiyaan qandaraaskiisa uu haatan ku qaato 365 kun ginni isbuucii islamarkaana ay ka bixiyaan lacag walba oo ay dowlada Spain ku sheegato ee la xiriirta kiiska canshuurta.
Kooxda reer Spain ayaa ka saxiixday xiddigaan heshiis uu 365 kun ginni ku qaadanayo isbuucii bishii November iyadoo heshiiskaas uu dhacayo 2021. Waxa uu haatan heli doonaa in loogu kordhiyo sannad kale iyo in la siiyo lacag uu isaga bixiyo ganaaxa uu kala kulmayo dowlada Spain.
Real Madrid ayaa dooneysa inay ceshato xiddigeeda oo ku hogaamiyay kooxda Champions League bishii la soo dhaafay, waxaana ay madaxiisa duldhigeen 175 milyan ginni.
Waxaa sidoo kale qandaraaskiisa haatan ee kooxda lagu burburin karaa 874 milyan ginni si ay kooxaha awood ugu yeeshaan inay la hadlaan ciyaaryahanka iyagoo aan soo marin Real Madrid.
CayaarahaReal Madrid	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousAskari Afghanistaaniya Oo Laayey Askar Maraykan Ah Oo Uu La Shaqaynaayey
NextMadaxda Trukiga, Faransiiska, Iyo Qatar Oo Ka Wada Hadal Dajinta Xasarada Bariga Dhexe
Cayaaraha	Jose Mourinho Oo Xukumada Spain Ku Eedaysay Khaayinnimo Iyo Wax Is Daba Marin	20th June 2017
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa lagu eedeeyay in uu lunsaday lacago canshuur ah, intii uu laylinayay kooxda Real Madrid ee dalka Spain ka dhisan, sida ay sheegeen dacwad oogeyaal reer Spain ah. Mourinho […]
Cayaaraha	Ugu Danbayn Arsenal Oo Caawa La Hoyatay Koobka FaCup, 2:1 Ku Dirtay Chelsea	27th May 2017
Kooxda kubada cagta ee Arsenal oo marka la eego kala horeynta horyaalka Ingariiska ku jirta kaalinta Shanaad ayaa caawa ku guuleysatay Koobka FA CUP ka.
Cayaaraha	Xulka Qaranka sacuudiga Iyo Taageerayaashooda Oo Diidady In Ay U Aamusaan Daqiiqad Weerarkii London	9th June 2017
Ciyaartoyda xulka qaranka Sacuudi Carabiya ayaa iska diida iney saf galaan si loo xuso dadkii ku waxyeeloobay weerarkii ka dhacay buundada London.